Nezvedu - Zhejiang Nady Power Technology Co., Ltd.
Iyo switchgear inonyanya kushandiswa muzvigadzirwa zvemagetsi, zvidiki uye zvakagadziriswa magetsi emagetsi, emabhizimusi uye emigodhi emabhizinesi, uye ekumisikidza yechipiri sisitimu yemagetsi yekugashira simba, kufambisa simba, uye kutanga kwehukuru-hukuru hwepamusoro-voltage mota inorder kuita kudzora, kuchengetedza, uye kuongorora.
NADY ndiyo yepasi subsidiary yeSuntree yemagetsi Boka Co, Ltd. Iyo yemazuva ano sainzi uye tekinoroji bhizinesi rinobatanidza kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwesimba michina. Iyo kambani inyanzvi yepamusorosoro bhizinesi, China mhando kutendeka bhizinesi, ine ISO9001 mhando chitupa, ISO14001: 2015 kwezvakatipoteredza manejimendi system chitupa, ISO45001 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi sisitimu uye CQC yepakati CCC certification.Iyo huru kugadzirwa kwe photovoltaic grid kabati, photovoltaic bhokisi transformer, yakagadzirirwa tangi, inflatable kabati, mhete mambure bhokisi uye 35kV yakakwira voltage kabati nezvimwe zvigadzirwa. , Rail Transit, Expressway, Kutaurirana, Chemical, Metallurgical uye mamwe maindasitiri vatengi.Zhejiang Nady Power Technology Co, Ltd ine mahofisi gumi nemasere munyika, yakasimba kutengesa uye mushure-kutengesa sevhisi network system, makeure 24-awa sevhisi mhinduro.
Yakasarudzika mhando: isu tinonamatira munzira yechiratidzo kwemakumi makumi ezviuru emagetsi emagetsi fekitori imba, zvine ruzha takaisa pamberi sirogani ye "mhando fekitori" kubva pakutanga kwebhizinesi.
Inoshanda nzira: Namatira kune "ingo zviite" musimboti.Namatira kumutsara wezvigadzirwa zvinodiwa nevashandisi, kuvandudza uye kugadzirwa kwegreen kuchengetedza kwezvakatipoteredza, akangwara, system kusangana, mhando yepamusoro yemhando yepamusoro yemhando yemagetsi mashandisiro emagetsi.
Iyo kambani yanga ichinamatira kunheyo yekubhadhara zvakaenzana matarenda nezvigadzirwa, ichitora ruzivo rweinjiniya nevashandi vehunyanzvi uye vehunyanzvi manejimendi vashandi. kuomesa manejimendi, tekinoroji yepamusoro, zvigadzirwa zvemberi zvekugadzira uye kuyedza kwakakwana zvinoreva nemhando yepamusoro zvigadzirwa, zvinopa mhando mushure-yekutengesa sevhisi kuti uwane kuzivikanwa kweazhinji evatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Iyo kambani mumweya we "magetsi ine mutengo, asi haivimbise mutengo" .Tinotenda zvakasimba kuti Kutenda kwakanaka, kuita kwakazara kweiyo simbiso system, ine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi anokunda kugutsikana kwevatengi nekuda kwezvinangwa netariro, zvakare kushandira pamwe nevatengi kuhwina-kuhwina, gadzira ramangwana riri nani!